🥇 Fujifilm EOFY Nye: Bilie ruo € 400 Gbanyụọ Họrọ Anya Mgbapụta X - 【Nkọwa】
Levi's Black Friday Men's Boxer Briefs Multipack (7 Pack), Nwa, White, L maka Menmụ nwoke
Uwe na-agbanwe agbanwe
Fujifilm EOFY Nye: Bilie ruo € 400 anya họrọ lenses X-Mount
Oge Fujifilm nke X-Mount bụ ụfọdụ igwe foto kachasị mma ị nwere ike ịzụta. Anya XF nke ika ahụ bụkwa elu nke akara ahụ ma ha niile na-abịa na mkpado ọnụahịa dabara adaba.
Agbanyeghị, zụọ ahịa n'oge azụmaahịa EOFY 2021 ma ị nwere ike ịnụ ụtọ nnukwu oghere XF maka obere na ndị na-ere ahịa enyere ikike. Ma, na obere oge, Fujifilm na-enye ihe ruru AU $ 400 ego na ire ere EOFY ya.
Nke a pụtara na ị nwekwara ike ịchekwa ntakịrị karịa nloghachi mbụ gị ma ọ bụrụ na ị yikwasị iko maka ọrụ - ha na-aghọ ụtụ isi ma ego na-abịa n'ụdị nloghachi ụtụ gị.
Ọtụtụ ihe ngosi XF na-eji akara ọnụọgụ ọnụọgụ anọ, nke dị mma. Ndị a bụ anya m siri ike nwere ihe eji ọla arụ rụọ, iko kachasị mma, na arụmọrụ dabara na igwefoto ha na-akwado.
Ha dị nnọọ iche na lenses XC nke Fujifilm, nke nwere kọmpat, obere, yana nhọrọ dị ọnụ ala maka igwefoto dịka Fujifilm X-A7 na X-T200. Anya oghere XF, n'aka nke ọzọ, bụ ndị enyi zuru oke maka ndị na-ese ihe dịka Fujifilm X-T4. Anya XF dị mma maka ndị ọrụ ntụrụndụ, ndị ọkachamara, ma ọ bụ ndị ọkachamara, a na-azụkwa ya nke ọma mgbe ị nwere ike ịchekwa obere ego.
Enwere naanị anya m isii gụnyere na onyinye Fujifilm's EOFY, yana ọkachamara ọkwa XF 50-140mm f / 2.8 R LM OIS WR lens na-enye gị ohere nke AU € 400. Ihe mbugharị ọzọ a gụnyere na onyinye bụ XF 10- 24mm f / 4 R OIS WR.
Ndị ọzọ bụ anya m (XF 56mm f / 1.2 R, XF 23mm f / 1.4 R, XF 35mm f / 1.4 R, na XF 27mm f / 2.8 R WR) ma na-akwụ ụgwọ na A $ 200 ma ọ bụ $ 350 ndị Australia.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ irite uru na-akwụghachi EOFY a, gbaa mbọ hụ na ị zụrụ ihe nyocha ọ bụla dị n’elu site n’aka onye na-ere ya ikike ma debe ụgwọ ụtụ gị. Gaa na Fujifilm's EOFY Cash Back Microsite ma mejupụta nkọwa gị.
Onyinye a gwụ June 30, 2021.